အကောင်းဆုံး Urolithin A & B အမှုန့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ
Cofttek သည် Urolithin A အမှုန့်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ Urolithin B အမှုန့်; 8-O-Methylurolithin A အမှုန့် cGMP ၏အခြေအနေအောက်တွင်။ လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 820KG နှင့်။
Urolithin A ၏ COA အမှုန့်
Urolithin B အမှုန့်၏ COA
COA 8-O-Methylurolithin A အမှုန့်
Urolithin A & B Powder အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ဤသည်မှာ သင်လိုအပ်သော လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ FAQs 24 ခုလုံးကို သင်ဖတ်ရန်သေချာပါစေ။
> Urolithin ဆိုတာ ဘာလဲ။
> လူသိများသော Urolithin မော်လီကျူးများ
> Urolithin A Powder Information Package
> Urolithin B Powder အချက်အလက် ပက်ကေ့ချ်
> Urolithins ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
> Urolithins ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
> Urolithins ၏ ပမာဏ
> Urolithins ၏အစားအစာအရင်းအမြစ်များ
> Urolithin A ကဘာလဲ။
> Urolithin သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
> ဘယ်အသီးအနှံတွေမှာ Urolithin A ပါလဲ။
> Urolithin ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ ။
> Urolithin က ဘာအတွက်ကောင်းလဲ။
> မည်သည့်အစားအစာများတွင် Urolithin A ပါဝင်သနည်း။
> Urolithin A ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
> ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများမှ Urolithin A ကို မည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။
> Mitopure ဆိုတာ ဘာလဲ ။
> လူသားစားသုံးမှုအတွက် Mitopure သည် ဘေးကင်းပါသလား။
> Mitopure ကို ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ရမလဲ။
> Urolithin ဖြည့်စွက်စာဆိုတာ ဘာလဲ။
> Urolithin A ဓာတ် အကျိုးကျေးဇူးများ
> Urolithin B ဆိုတာဘာလဲ။
Urolithins များသည် ellagitannins ကဲ့သို့ ellagic acid အစိတ်အပိုင်းများမှဆင်းသက်လာသူများသို့မဟုတ် metabolites များဖြစ်ကြသည်။ ဤဓာတုအစိတ်အပိုင်းများကိုအူ microbiota မှ ellagic acid-derivatives များမှ metabolized လုပ်သည်။
အူလမ်းကြောင်းပန်းပွင့်သည် urolithins ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သော urolithins ပမာဏသည်ပန်းပွင့်ရှိသက်ရှိအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ Clostridium leptum အုပ်စုတွင်အရေးကြီးဆုံးသက်ရှိဖြစ်သည်။ ဤအုပ်စုတွင် microbiota ကြွယ်ဝသောလူများသည် Bacteroides သို့မဟုတ် Prevotella ကဲ့သို့အခြားအူပန်းများရှိသောသူများထက် urolithins ထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံသည်။
Urolithins ကိုလည်း ellagitannins ကဲ့သို့အတိအကျအူမှ punicalagin မှထုတ်လုပ်ပြီးဆီးမှထုတ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌ urolithin ထုတ်လုပ်မှုကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းတို့၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် ellagic acid (သို့) urolithins ပါ ၀ င်သောအစားအစာများကိုစားသုံးခဲ့သောသူ၏ဆီး၌သူတို့၏အဆင့်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ပလာစမာတွင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သော Urolithin ကို glucuronides ပုံစံဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Urolithins ကိုအစားအစာများစွာတွင်သဘာဝအတိုင်းရရှိသော်လည်း urolithins မော်လီကျူးအားလုံးသည်အစားအစာမှမရရှိနိုင်ပါ။ ellagic acid ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုစားသုံးပြီးသည်နှင့်၎င်းသည် ellagitannins နှင့် punicalagin ကိုအလယ်အလတ် metabolites များနှင့်အဆုံးထုတ်ကုန်များအဖြစ်သို့ဖြိုခွဲရန်အူလမ်းကြောင်းပန်းပင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ urolithin မော်လီကျူးများ
ဤမော်လီကျူးများသည်မကြာသေးမီကလူကြိုက်များလာပြီး၎င်းတို့၏အကျိတ်များကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေသောအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် superfood ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်ဆက်လက်မြင့်တက်လာသည်။ ထို့ပြင် urolithin မော်လီကျူးများသည်၎င်းတို့သည် mitochondrial ကျန်းမာရေးအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်တိုးတက်လာသောစွမ်းအင်အဆင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် mitochondria တွင်ဖြစ်ပေါ်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဤ organelle ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းသည် Urolithins ၏လုပ်ဆောင်ချက်များစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူသိများသော Urolithin မော်လီကျူးများ
Urolithins သည် urolithin မိသားစုမှကွဲပြားသောမော်လီကျူးများကို စုပေါင်း၍ ကွဲပြားသောဓာတုဖော်မြူလာများ၊ IUPAC အမည်များ၊ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ရင်းမြစ်များရှိသည်။ ထို့ပြင်ဤမော်လီကျူးများသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြည့်စွက်ပုံစံ၌ကွဲပြားစွာကြေငြာသည်။
ကျယ်ပြန့်သော သုတေသနပြုပြီးနောက်တွင် Urolithin သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါ မော်လီကျူးများအဖြစ်သို့ ကွဲထွက်သွားကြောင်း သိရှိရသည်- ●Urolithin A (3,8-Dihydroxy Urolithin)
● Urolithin D (၃၊၄၊၈၊၉-Tetrahydroxy Urolithin)
UrolA A နှင့် UroB ဟုလူသိများသော Urolithin A နှင့် Urolithin B တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ Urolithins ၏လူသိများသော metabolites များဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုတို့သည်လည်းဖြည့်စွက်နှင့်အစာအစားထိုးအမှုန့်များတွင်လက်ရှိသုံးနေသောမော်လီကျူးများဖြစ်သည်။
သွေးထဲရောက်သည်နှင့် Urolithin A သည် Urolithin A glucuronide ကဲ့သို့ Urolithin B ကို Urolithin B glucuronide အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့သည် vivo လေ့လာမှုများတွင် urolithins နှင့်မဖြစ်နိုင်သောသူတို့၏ရှေ့ပြေးနိမိတ်များကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ vivo လေ့လာမှုမရှိခြင်းသည် UroA နှင့် UroB glucuronides များသည် UroA နှင့် UroB တို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုအကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
Urolithin A သည် Urolithin A sulfate ဟုခေါ်သောသွေး၌တွေ့ရှိနိုင်သောအခြားဆင်းသက်လာသည်။ ဤအနကျအဓိပ်ပါယျအားလုံးတို့သည်သွေး၌၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဆီးမှတဆင့်စနစ်မှထုတ်ပစ်သည်။
Urolithin D သည် အူ microbiota ၏ အာနိသင်ကြောင့် ထုတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အလားအလာအသုံးပြုမှုများအကြောင်းကို များများစားစား မသိရှိပါ။ လက်ရှိတွင်၊ ၎င်းကို ၎င်း၏တွဲဖက်ဖြစ်သော UroA နှင့် UroB တို့နှင့်မတူဘဲ မည်သည့်ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် အစားအစာအစားထိုးများတွင် အသုံးမပြုပါ။ ထို့အပြင် Urolithin D ၏ အစားအသောက် အရင်းအမြစ်များကို မသိရှိပါ။
Urolithin A Powder သတင်းအချက်အလက်အထုပ်
Urolithin A ကိုအစားအစာအရင်းအမြစ်များမှသဘာဝအလျောက်မရရှိနိုင်ဘဲ benzo-coumarins သို့မဟုတ် dibenzo-α-pyrones ဟုခေါ်သောဒြပ်ပေါင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ellagitannins မှ Urolithin A 8-Methyl Ether သို့ထပ်မံမဖြိုခွဲမီ၎င်းသည် Urolithin A သို့ထပ်မံဖြိုဖျက်မခံရမီဤအဆုံးထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမှ Urolithin A အမှုန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ MethylUrolithin A အမှုန့်ကိုလိုအပ်လျှင်အမြောက်အများ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
Urolithin A သည်အူလမ်းကြောင်း microbiota ၏လုပ်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်သောကြောင့်ကွဲပြားသောလူများတွင်၎င်း၏ရှေ့ပြေးစားသုံးမှုအဆင့်များနှင့်တူညီသောအဆင့်များတွင်မရနိုင်ပါ။ Urolithin A ၏ဇီဝြဖစ်မှုသည် Gordonibacter urolithinfaciens နှင့် Gordonibacter pamelaeae တို့ကိုလိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်သော်လည်းဤအတူပါသူအချို့သည်မော်လီကျူးထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်မျှသာပြသေးသည်။
Urolithin A သည်အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောကဲ့သို့အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှ၎င်းကိုထူးခြားစေသည်။
IUPAC name ကို
3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (ခ,)) pyran-6-one; 3,8-DIHYDRO DIBENZO- (B, D) PYRAN-6-ONE; 3, 8-Dihydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-one; Castoreum ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း I; Urolithin A; 6H-Dibenzo (B, D) pyran-6-one, 3,8-dihydroxy-; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzopyran-6-one); urolithin-A (UA; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-one
> 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
InChI Key ကို
DMSO (3 mg / mL) တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
ရက်သတ္တပတ်မှရက်သတ္တပတ်များ၊ မှောင်ပြီးခြောက်သွေ့သောအခန်း၌ ၀ -၄ ဒီဂရီစင်တီဂလမှနှစ်များ၊ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်၊ ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အရည်များနှင့်ဝေးဝေးထားပါ။
Urolithin B Powder သတင်းအချက်အလက်အထုပ်
Urolithin B သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်လာသည့် phenolic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Urolithin B. သို့ metabolized လုပ်ပေးနိုင်သော ellagitannins သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောအစားအစာများစွာကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Urolithin B အမှုန့်ပုံစံဖြင့်အမြောက်အများ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွင်ရနိုင်သော Urolithin B အမှုန့်၏ကွဲပြားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
3-Hydroxy-6H-dibenzo [ခ၊ ]] pyran-6-one
AURORA ၂၂၆; Urolithin B ကို; AKOS BBS-226; 00008028-hydroxy urolithin; 3-hydroxy-3-benzo [c] chromenone; 6-hydroxybenzo [c] chromen-3-one; 6-Hydroxy-benzo [c] chromen-3-one; 6-HYDROXY-3H-DIBENZO [B, D] PYRAN-6-ONE; 6H-Dibenzo (b, d) pyran-6-one, 6-hydroxy-; 3-Hydroxy-3H-benzo [c] chromen-6-one AldrichCPR
> 247 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
နွေးသောအခါကြည်လင်သောအရည် ၅ မီလီဂရမ်/ml တွင်ပျော်ဝင်သည်
Anti-oxidant နှင့် Pro-oxidant ဓာတ်တို့သည် estrogenic လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ
အူပန်းသစ်ပင်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Urolithins ၏ဤအဓိကမော်လီကျူးများ မှလွဲ၍ အခြားအရာများသည်ရှေ့ကိုပျက်သွားစဉ်ကြားဖြတ်ဖွဲ့စည်းထားသောကြားခံမော်လီကျူးများစွာရှိသည်။ ဤအကြားခံများပါဝင်သည်:
ယခုအချိန်ထိဤကြားခံပစ္စည်းများအကြောင်းကိုသိပ်မသိသေးသော်လည်းနောက်ထပ်သုတေသနသည်ဤ Urolithin မော်လီကျူးများ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အလားအလာရှိသည်။
ဖြည့်စွက်စာများတွင်သုံးသောအခြားဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့ Urolithins သည်၎င်းတို့၏အကျိုးအာနိသင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်အင်္ဂါများနှင့်စနစ်များကိုထိခိုက်စေသည်။ A နှင့် B နှစ်ခုစလုံးတွင် Urolithins ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကိုအဓိကဌာနခွဲ ၆ ခု ခွဲ၍ အသီးအသီးအကျိုးအမြတ်များစွာထုတ်လုပ်ရန်အလားအလာရှိသည်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာခန္ဓာကိုယ်၌ oxidative stress ကိုလျော့ကျစေသည်။ Oxidative stress သည် free radicals ဟုလည်းခေါ်သည့်မတည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသောဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များနှင့်တစ်သျှူးများပေါ်တွင်ဖိစီးမှုကိုဆိုလိုသည်။ ဤ free radicals များသည်ခန္ဓာကိုယ်၌မတည်ငြိမ်သောဓာတုတုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အလားအလာပိုရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဆဲလ်များနှင့်တစ်သျှူးများကိုပျက်စီးစေသည်။
Urolithins သည်ဆဲလ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကိုဟန့်တားပေးပြီးဆဲလ်ရှင်သန်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေသည်။ free radicals အမျိုးအစားများဖြစ်သော intracellular Reactive Oxygen Species (iROS) ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဤသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ထို့ပြင် Urolithin A နှင့် Urolithin B ၏ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများသည် oxidative ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အလွန်အရေးပါသော NADPH oxidase subunit expression မှတဆင့်လည်းဖြစ်ပေါ်သည်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများကိုထုတ်လုပ်ရန် Urolithins သည် Nrf1/ARE အချက်ပြလမ်းကြောင်းမှတဆင့် antioxidant heme oxygenase-2 ၏သရုပ်ကိုတိုးစေသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်ပေါင်းများကိုလျှော့ချပေးရုံသာမက antioxidant ဂုဏ်သတ္တိကိုမြှင့်တင်ပေးသောကောင်းသောအင်ဇိုင်းများကိုတိုးစေသည်။
ကြွက်သားများကို LPS-induced ဦး နှောက်ပျက်စီးစေသောကြွက်များအားပေးသောအခါ Urolithins သည် microglial activation ကိုတားစီးသည် (သို့) ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်အမာရွတ်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုအမြဲတမ်း ဦး နှောက်ပျက်စီးစေမည့်အန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ urolithins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများရောစပ်ထားသည်ဟုယုံကြည်သည်။
Urolithins ၏ရောင်ရမ်းဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများသည်ဖြည့်စွက်စာလောကတွင်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုမြင့်တက်စေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းများ၊ အထူးသဖြင့် Urolithin A, Urolithin B နှင့်၎င်းတို့၏ glucuronides ပုံစံတို့သည်ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားပြီးတူညီသောရလဒ်များကိုထုတ်ပေးသည်။
Urolithin A နှင့် Urolithin B ၏ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် Ibuprofen နှင့် Aspirin ကဲ့သို့ Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs (သို့) NSAIDs ကဲ့သို့တူညီသောယန္တရားရှိသည်။ Urolithins သည် PGE2 ထုတ်လုပ်မှုနှင့် COX-2 ၏အဟန့်အတားကိုသိရှိသည်။ NSAIDs များသည် COX 1 နှင့် COX2နှစ်ခုလုံး၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုဟန့်တားသောကြောင့် Urolithins သည်ပိုမိုရွေးချယ်နိုင်သောရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအာနိသင်ရှိသည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
Urolithins ၏ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများသည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရုံသာမကကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရေရှည်ရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပျက်စီးမှုကိုပြန်ပြောင်းပေးနိုင်သည်။ တိရိစ္ဆန်မော်ဒယ်များတွင်ပြုလုပ်သောမကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် urolithin စားသုံးမှုသည်ကျောက်ကပ်ဆဲလ်သေခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဟန့်တားပေးခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော nephrotoxicity ကိုလျော့ပါးစေနိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခံတွင်း၌ပေးထားသော urolithin A အမှုန့်သည်ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကာကွယ်ပေးသောကြောင့် proapoptotic cascade နှင့်ရောင်ရမ်းမှုလမ်းကြောင်းကိုဟန့်တားသောအာနိသင်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Urolithin A ၏ဤဂုဏ်သတ္တိများသည်အခြား urolithins များနှင့်အတူ၎င်းတို့အားဆေးများကိုလက်ရှိအားဖြည့်ဆေးများနှင့် တွဲ၍ သုံးနိုင်မည့်အနာဂတ်ဆီသို့ညွှန်ပြသည်။
Urolithins များသည်ဆဲလ်သံသရာဖမ်းဆီးခြင်း၊ aromatase တားဆီးခြင်း၊ apoptosis ကိုစတင်ခြင်း၊ အကျိတ်ကိုနှိမ်နင်းခြင်း၊ autophagy ကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း၊ oncogenes ၏စာသားကူးပြောင်းမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ကြီးထွားစေသော receptors များဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိလျှင်ကင်ဆာဆဲလ်များပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Urolithins ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလက္ခဏာများသည်အထူးသဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အူမကြီးကင်ဆာအတွက်သုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Urolithins အားဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်အလားအလာရှိသောကာကွယ်ဆေးများအဖြစ်အသုံးပြုရန်စုဝေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုသည်ပန်ကရိယကင်ဆာအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် mTOR လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် Urolithin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပန်ကရိယကင်ဆာသည်သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်၊ သို့သော်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနများအရ Urolithin သည်ရှင်သန်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရုံသာမကခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့အကျိတ်များဖြတ်တောက်ခြင်းကို metastasis ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Urolithin A ကိုအထူးလေ့လာခဲ့ပြီးရလဒ်များကို standard treatment regimen မှထုတ်လုပ်သောရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ Urolithin A သည်ပန်ကရိယကင်ဆာကိုကုသရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်စံကုသမှုအစီအစဉ်နှင့်သုံးသောအခါ
နောက်ထပ်သုတေသနများအရ Urothilins ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ပန်ကရိယကင်ဆာကိုလည်းအပြီးအပိုင်ကုသပေးနိုင်သည်။
● Antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများ
Urolithins များသည် antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများပြီး၎င်းတို့အားဆဲလ်များသို့ကူးစက်ရန်ခွင့်မပြုဘဲသေးငယ်သောပိုးမွှားများ၏ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် antifungal ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်းအတိအကျယန္တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။
Urolithins သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်စေသောအထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်တားစီးနိုင်သောပိုးမွှားနှစ်ခုရှိသည်။ ဤရောဂါပိုးများသည်ငှက်ဖျားရောဂါပိုးမွှားများနှင့် Yersinia enterocolitica တို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်လူများအားပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါများဖြစ်စေသည်။ သက်ရှိများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ Urolithins တွင် antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများပါ ၀ င်သောယန္တရားသည်တူသည်။
● Anti Estrogenic နှင့် Estrogenic Properties
အက်စထရိုဂျင်သည်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးသောဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဆင့်များကျဆင်းခြင်းသည်နီမြန်းခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်းနှင့်အရိုးထုထည်ကျဆင်းခြင်းကဲ့သို့လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဟော်မုန်း၏အရေးပါပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အစားထိုးသူတစ် ဦး ကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေနေသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ သို့ရာတွင် exogenous ဟော်မုန်းများသည်၎င်းတို့ကိုမလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ရှိသည်။
သို့သော် Urolithin A နှင့် Urolithin B တို့သည် endogenous estrogen နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း estrogen receptors များနှင့်တူညီသည်။ Urolithin A သည်အထူးသဖြင့် beta receptor နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် alpha receptor အတွက်ပိုမိုခိုင်ခံ့မှုရှိသည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းနှစ်ခုစလုံးသည် estrogen နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတူညီသော်လည်း urolithins သည် endogenous estrogen နှင့်မတူဘဲ estrogenic နှင့် anti-estrogenic ဂုဏ်သတ္တိနှစ်ခုလုံးရှိသည်။
Urolithins ၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်နှစ် ဦး စလုံးအားအီစထရိုဂျင်ချို့တဲ့လက္ခဏာကိုကုသရန် exogenous estrogen ကိုပေးသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောအချို့သောရောဂါများအတွက်အလားအလာရှိသောကုသမှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်စေသည်။
● Protein Glycation ကိုဟန့်တားပေးခြင်း
Protein glycation သည်သကြားမော်လီကျူးတစ်ခုအားပရိုတင်းတစ်ခုနှင့်ချည်နှောင်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်ချိန် (သို့) အချို့မူမမှန်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တွေ့ရသည်။ Urolithins သည်သကြားထပ်တိုးခြင်းကိုဟန့်တားသောကြောင့် glycation ဆန့်ကျင်သောအာနိသင်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အဆင့်မြင့် glycation endproducts ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတားဆီးသည်၊ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောရောဂါဗေဒဆိုင်ရာအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Urolithins သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ကွဲပြားသောအကာအကွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်လုပ်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ Urolithin A အမှုန့်နှင့် Urolithin B အမှုန့်များသည်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ကျော်ကြားသောဖြည့်စွက်စာများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကူညီပေးသည်။ ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံ ပြု၍ ရောဂါများစွာကိုကုသရန်လမ်းညွှန်ချက်များတွင် Urolithins ကိုထည့်သွင်းရန်ထပ်မံသုတေသနပြုလုပ်ဆောင်နေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါယန္တရားများကို အခြေခံ၍ ဤဒြပ်ပေါင်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Urolithins သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကြွယ်ဝသည်ဟုသိသော ellagitannins ကြွယ်ဝသောအစားအစာများစွာမှထုတ်ယူသည်။ ellagitannins နှင့် ellagic acid အတွက်အသုံးအများဆုံးအစားအစာရင်းမြစ်သည်သလဲသီးဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် antioxidants အရင်းအမြစ်များလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အစားအစာအရင်းအမြစ်နှင့် urolithins တို့၏ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများတူညီလျှင်သို့မဟုတ်အခြားသူထက်အလားအလာပိုရှိလျှင်ခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်။
Urolithin A နှင့် Urolithin B တို့၏ကန ဦး လေ့လာချက်များအရဤဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်များသည်အသီးများထက် ၄၂ ဆလျော့နည်းကြောင်းပြသသည်။
သို့သော်လည်းကွဲပြားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းဖြင့်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများက Urolithin A နှင့် B နှစ်ခုစလုံးသည်အတော်လေးထိရောက်မှုရှိပြီး oxidative stress ၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်မည့်အစွမ်းထက် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်သော urolithins အားလုံးကိုလေ့လာရန်တူညီသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသုံးသောအခါ Urolithin A သည်သိသာထင်ရှားသည်။ ရလဒ်များကို Urolithin A နှင့်အာနိသင်ကို ဦး ဆောင်စေသောအလားတူလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့လေ့လာမှုတစ်ခုကဒီဓာတုဒြပ်ပေါင်းတွေရဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဖိစီးမှုကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုတေသီများသည်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုဖိစီးစေပြီး Urolithins၊ အထူးသဖြင့် Urolithin B နှင့်ထိတွေ့သောအခါအာရုံကြောဆဲလ်များရှင်သန်ရှင်သန်မှုနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုသိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
အချို့သောကျေးလက်ဒေသများတွင်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေသောငှက်ဖျားကုသရေးအတွက်အိမ်သုံးဆေးသည် Pomegranate ကိုသုံးသည်။ သုတေသီများသည်သလဲသီး၏အူလမ်းကြောင်းမှ metabolized လုပ်ထားသော Urolithins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းဖြင့်ငှက်ဖျားကုသခြင်း၏ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ကူးစက်ခံရသော monocytic ဆဲလ်များကို Urolithins သို့ပြသခြင်းဖြင့်ငှက်ဖျားကုသရာတွင် Urolithins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုသည်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများသည်ငှက်ဖျားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်အရေးပါသော metalloproteinase ဖြစ်သည့် MMP-9 ထုတ်လွှတ်မှုကိုဟန့်တားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒြပ်ပေါင်းကိုဟန့်တားခြင်းသည်ငှက်ဖျားရောဂါကိုငှက်ဖျားရောဂါအာနိသင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၌ရောဂါဖြစ်စေသောငှက်ဖျားရောဂါကိုတားဆီးပေးသည်။
လေ့လာမှုရလဒ်များအရ Urolithins သည် malarial pathogens mRNA ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုဟန့်တားသည်၊ ၎င်းသည်ပိုးမွှားများကိုသေစေနိုင်သော microorganisms များ၏စွမ်းရည်ကိုထပ်မံဟန့်တားသည်။ ဤလေ့လာမှုရလဒ်များအရသလဲသီးအပါအ ၀ င်အိမ်လုပ်ဆေးများ၏အကျိုးအာနိသင်များသည် urolithin ၏အာနိသင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
2. Endothelial ဆဲလ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု
Atherosclerosis သည်နှလုံးထိခိုက်ခြင်းနှင့် myocardial infarctions များဖြစ်စေသောအဖြစ်များသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ atherosclerosis ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကွယ်မှအဖြစ်များသောအချက်နှစ်ချက်မှာ endothelial dysfunction နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများက Urolithin ၏ရောင်ရမ်းဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများသည် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး atherosclerosis ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုစီမံနိုင်သည်။
Urolithin A ကို urolithins အားလုံးတွင်ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်ချက်အမြင့်ဆုံးရှိသည်ဟုသုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် oxidized LDL နှင့်ပေါက်ဖွားခဲ့သောလူ့ endothelial ဆဲလ်များကိုအာရုံစိုက်သည်၊ atherosclerosis ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအချက်များနှင့် Urolithin A. ၏ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံစူးစိုက်မှုများကိုသုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေပြီးဆဲလ်များ၊ အထူးသဖြင့် monocytes များသည် endothelial ဆဲလ်များကိုတွယ်ကပ်စေသည်။ monocytic လိုက်နာမှုကိုလျှော့ချခြင်းသည် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသက်သာစေသည်။
ထို့ပြင် Urolithin A သည်အကျိတ် necrosis factor α, interleukin6နှင့် endothelin 1 တို့၏လက္ခဏာပြမှုကိုလျှော့ချရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရောင်ရမ်းမှုကိုလိုလားသော cytokines အားလုံး
၃။ Colon ရှိ Fibroblasts အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု
အူမကြီးသည် exogenous pathogens များနှင့်ရောင်ရမ်းမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်ရေရှည်တွင်ကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Urolithin A နှင့် Urolithin B တို့ကိုအူလမ်းကြောင်းသစ်ပင်ပန်းမန်များမှထုတ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
အူမကြီးဆဲလ်များနှင့် fibroblasts များပေါ်တွင် Urolithins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာရန်သုတေသီများက fibroblasts များသည်ရောင်ရမ်း cytokines နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် Urolithins သို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Urolithins သည်အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်းကိုတားဆီးရန် monocyte adhesion နှင့် fibroblast ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုဟန့်တားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် Urolithins သည်ရောင်ရမ်းမှုထိန်းညှိမှုအတွက်အရေးကြီးသော NF-factorB factor ၏ activation ကိုဟန့်တားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမှန်တော့သုတေသီများက၎င်းသည် urolithins ၏ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများနောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းအရင်းဟုယုံကြည်သည်။
Urolithins သည်ကင်ဆာဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆက်နွယ်နေပြီးဤဂုဏ်သတ္တိ၏ယန္တရားကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဂုဏ်သတ္တိများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ခန္ဓာကိုယ်၌ Urolithins ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုအများအားဖြင့်သွေး (သို့) ဆီးဖြင့်သုံးသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်အူမကြီးဆီးကျိတ်ဂလင်းနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤတွေ့ရှိချက်၏ရလဒ်အဖြစ်သုတေသီများသည်ဆီးကျိတ်ဂလင်း၌ကဲ့သို့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်နိုင်သလားအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Urolithins သည်ဆီးကျိတ်ဂလင်းအပေါ်အကာအကွယ်အာနိသင်ရှိသည်ဟုသက်သေပြသောလေ့လာမှုတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
Urolithin A နှင့် Urolithin B နှင့် Urolithin C နှင့် Urolithin D တို့သည်ဆီးကျိတ်ဂလင်း၌ CYP1B1 အင်ဇိုင်းကိုဟန့်တားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအင်ဇိုင်းသည်ဓာတုကုထုံး၏ ဦး တည်ချက်ဖြစ်ပြီးအခြား urolithins များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Urolithin A အားပြင်းပြင်းထန်ထန်တားဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် CYP1A1 ကိုလည်းတားစီးသည်၊ သို့သော်၎င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင့်မားရန် urolithins ပိုမိုမြင့်မားစွာလိုအပ်သည်။
Urolithins ၏ဆီးကျိတ်အကာအကွယ်အာနိသင်များကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Urolithin A သည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအပေါ်ကင်ဆာဆန့်ကျင်သောအာနိသင်ရှိသည်၊ p53 မှီခိုခြင်းနှင့် p53 လွတ်လပ်သောနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးမှတဆင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုဆန့်ကျင်သောအာနိသင်ရှိသည်။
2.Topoisomerase2နှင့် CK2inhibition
Urolithins သည်ကင်ဆာကြီးထွားမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်မော်လီကျူးလမ်းကြောင်းများစွာကိုတားဆီးခြင်းအားဖြင့်ကင်ဆာဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ CK2 အင်ဇိုင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းများတွင်ပါ ၀ င်သောအရေးကြီးသောအင်ဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာကိုအားပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Urolithins သည်ပျံ့နှံ့နေသောအင်ဇိုင်းများဖြစ်သော CK2 ကို၎င်း၏ကင်ဆာမြှင့်တင်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများကဲ့သို့နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတားစီးရန်ကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းများကိုတားသည်။ Urolithin A သည် silico တွင်အစွမ်းထက် CK2 inhibitor ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ Topoisomerase2inhibition သည်ကင်ဆာဆန့်ကျင်အာနိသင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။ တကယ်တော့ဒီယန္တရားကို Doxorubicin ကဲ့သို့သောဓာတုကုထုံးအချို့အသုံးပြုသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Urolithin A သည် Topoisomerase2ကိုတားဆီးရာတွင် Doxorubicin ထက် Dozorubicin ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်ကင်ဆာအချို့အားကုသရန်လက်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များကိုထပ်တိုးတောင်းဆိုထားသည်။
Urolithins ၏ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများသည်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများအားဆက်သွယ်ရန်၊ ရွေ့လျားရန်နှင့် virulence အချက်များကိုဖြစ်စေနိုင်သော Quorum Sensing Inhibition ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများ၏ရှင်သန်မှုအတွက်အရေးပါသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီး Urolithins အားဖြင့်တားဆီးခြင်းသည်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများအတွက်သေစေနိုင်သည်။
Urolithin ၏အဓိက antibacterial ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ Yersinia enterocolitica ၏ကြီးထွားမှုမှအူကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အမှန်အားဖြင့် Urolithins သည်၎င်းတို့ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည့်တူညီသောပန်းပင်များ၏ modulation နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပန်းပင်များတွင်သီးခြားသက်ရှိများသာ Urolithins ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်။
Urolithins သည် Estrogen receptors များနှင့်ချည်နှောင်ပြီး estrogenic နှင့် anti-estrogenic ဂုဏ်သတ္တိနှစ်မျိုးလုံးကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းအား Selective Estrogen Receptor Modulators (သို့) SERMs များအတွက်ကြီးစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းယန္တရားတစ်ခု၏ခန္ဓာကိုယ်ဧရိယာတစ်ခြမ်းတွင်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားဧရိယာတစ်ခု၌အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် urolithins ၏ estrogen receptors များအပေါ်သက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့် urolithin A သည် ER-positive endometrial ကင်ဆာဆဲလ်များ၏မျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုကိုတားဆီးပေးပြီး endometrial cancer ကိုနှိမ်နင်းစေသည်။ Endometrial hypertrophy သည်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုခံယူသောအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ exogenous estrogen ၏ပုံမှန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပြီး urolithins ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် endometrium ကိုအကာအကွယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သို့သော် Urolithins သည်နောက်ထပ် SERM ဆေးမဖြစ်လာမီနောက်ထပ်သုတေသနလုပ်ရန်လိုသည်။
အဆင့်မြင့် glycation အဆုံးထုတ်ကုန်များရှိနေခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဒဏ်ရာ (သို့) အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသို့ပင်ဖြစ်စေသော hyperglycemia ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Urolithin A နှင့် Urolithin B တို့သည်နှလုံးထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး neurodegeneration ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
ထို့ကြောင့် Urolithins ၏ protein glycation ကိုဟန့်တားခြင်းသည် cardioprotective နှင့် neuroprotective အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။
Urolithin A ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အချို့သောရောဂါများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပုံမှန်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အရေးပါသော mitochondria ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ပြင် mitochondria ကိုမကြာခဏဆဲလ်များ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်၎င်း၏အရေးပါမှုကိုဆိုလိုသည့် 'ဆဲလ်၏စွမ်းအား' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုပျက်စီးစေခြင်းသည်ဆဲလ်ကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်စေပြီး၎င်း၏သက်တမ်းကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေသည်။
Urolithins သည် mitophagy ဟုခေါ်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုမခွဲခြားဘဲပျက်စီးစေသောအသက်တာကိုတိုးစေသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ mitochondria သည်အာဟာရနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း urolithins သည်ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး၎င်းသည် ဦး နှောက်တွင်အာရုံကြောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးသော၎င်းဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကိုကောင်းစေသည်။ ထို့ပြင် Urolithin A သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်တွေ့ရသော neurodegeneration ကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် neuroprotective effects များ။
Urolithin A သည်ကင်ဆာဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်၊ သို့သော်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ၏အထူးသဖြင့်၎င်းတို့ကိုဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကုသရာတွင်လေ့လာမှုများစွာနှင့်အတူဆီးကျိတ်ကင်ဆာတွင်အထူးသဖြင့်မြင်နိုင်သည်။
Urolithin A သည်အဝလွန်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအာနိသင်ရှိပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၌အဆီဆဲလ်များစုဆောင်းခြင်းကိုသာမက adipogenesis အတွက်တာဝန်ရှိသည့်အမှတ်အသားများကိုပါတားဆီးပေးသည်။ တိရစ္ဆာန်ပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Urolithin A သည် T3 သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကိုကြွက်များတွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပိုမိုမြင့်တက်စေသည်။ ၎င်းသည် thermogenesis ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအညိုရောင်အညိုရောင်ကိုအရည်ပျော်စေပြီး၊ အဖြူရောင်အညိုရောင်သည်အညိုရောင်သို့ကူးပြောင်းစေသည်။
တူညီသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် URolithin A သည်အဆီဓာတ်များသောအစားအစာများကိုကျွေးသောကြွက်များ၌ပင်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးစွာသောကတိကိုပြသပြီးသုတေသီများသည်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုလူသားများအသုံးချနိုင်ရန်အဝလွန်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဤဒြပ်ပေါင်းကိုအလားအလာကောင်းများပေးနိုင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Urolithin B ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Urolithin B သည် Urolithin A ၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုဝေမျှသော်လည်းသူ့၌ထူးခြားမှုတစ်ခုသာရှိသည်။ Urolithin B သည်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နှင့်ရောဂါအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်လူသိများသည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်ကြွက်သားများ၌ပရိုတင်းပေါင်းစပ်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အရိုးကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုအားပေးသည်။
သူတို့ရဲ့ sciatic အာရုံကြောကိုဖြတ်တောက်ထားတဲ့ကြွက်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုမှာကြွက်သားတွေကျုံ့တာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများကျုံ့ခြင်းကို ဦး တည်စေသော်လည်းကြွက်များအား Urolithin B. ကိုအဆက်မပြတ်ပေးသော mini osmotic pumps များနှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့သည်။ sciatic အာရုံကြောအပိုင်းများရှိနေသော်လည်းကြွက်သားများရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို ဦး တည်စေသည်။ မရ။
Urolithins များသည်သဘာဝဒြပ်ပေါင်းများမှဆင်းသက်လာပြီး၎င်းတို့၏အာဟာရဖြည့်စွက်များသည်အဆိပ်သင့်မှုမရှိကြောင်းကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုယူဆသည်။ သို့သော်၊ ဤဒြပ်ပေါင်းများသည်သုတေသနပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသင့်သောဆေးပမာဏကန့်သတ်ချက်ရှိသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
Urolithin A ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုပြီးနောက်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်း၏မှန်ကန်သောပမာဏကိုအကဲဖြတ်ရန်သုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စုပ်ယူခြင်း၊ အစာချေဖျက်ခြင်း၊ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းလေ့လာမှုသည်ဒြပ်ပေါင်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရက်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ လေ့လာမှုကိုနှစ်ပိုင်း ခွဲ၍ ၂၈ ရက်ကြာလေ့လာမှု၌ ၀.၀၁၇၅၊ ၁.၇၅ နှင့် Urolithin A ၅.၀% ကိုအစားအစာ၌ရောနှောပြီး ၉၀ ရက်လေ့လာမှု၌ ၀.၂၅၊ ၂.၅ နှင့် ၅.၀% Urolithin A တို့ကိုရောနှောထားသောဓာတ်စာသည်လက်တွေ့သတ်မှတ်ချက်များ၊ သွေးဓာတုဗေဒသို့မဟုတ်သွေးရောဂါဗေဒတွင်မပြောင်းလဲဘဲပြသထားပြီးမည်သည့်တိကျသောအဆိပ်ယန္တရားကိုမှမဆိုလိုပေ။ လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးတွင်အောက်ပါဆေးများကို ဦး တည်စေသောအစားအစာ၌အလေးချိန်အားဖြင့် 28% UA တွင်အမြင့်ဆုံးဆေးထိုးခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ပါးစပ်လေ့လာမှုတွင်အမျိုးသားများ၌ ၃၄၅၁ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် BW နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် ၃၈၂၆ မီလီဂရမ်/ကီလို BW/ရက်
Urolithin A နှင့်ဆင်တူသော၊ Urolithin B သည်ပြီးပြည့်စုံသောဆေးပမာဏကိုအကဲဖြတ်ရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လေ့လာမှုများသည်အကောင်းဆုံးကြွက်သားတိုးတက်မှုကိုရရှိရန်လုံခြုံသောသောက်သုံးသောဆေးကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤဆေးကိုကျားမအလေးချိန်မခွဲခြားဘဲလိင်နှစ်မျိုးလုံးအတွက် 15uM ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းဒြပ်ပေါင်းကို Urolithin A ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအလယ်အလတ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသုံးသည်။ သို့သော်ဤအထူး Urolithin အတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တော်သောသောက်သုံးသောပမာဏအတွက်လုံလောက်သောသုတေသနကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
Urolithins ကိုမည်သည့်အစားအစာရင်းမြစ်တွင်မှသဘာဝအလျောက်မတွေ့ရသော်လည်း ellagitannins အဖြစ်တွေ့ရှိသည်။ ဤ tannins များသည် ellagic acid အဖြစ်သို့ပြိုကွဲသွားပြီး Urolithin A 8-Methyl ether သို့ထပ်မံ metabolized လုပ်ပြီး Urolithin A သို့နောက်ဆုံးတွင် Urolithin B. ၌ Urolithins ကြွယ်ဝသောအစားအစာများမှာ-
သစ်သီးများ (လတ်ဆတ်သောအလေးချိန် ၁၀၀ မီလီဂရမ်/၁၀၀ ဂရမ်)
ဇယားတွင်မြင်ရသည်အတိုင်း Cloudberries သည် Ellagitannins နှင့် Ellagic acid အမြင့်ဆုံးပါ ၀ င်သောအသီးဖြစ်ပြီး Pomegranate သည်ဒုတိယအဖြစ်ဖြစ်သည်။ Pomegranate Juice သည် Cloudberries ထက်သုံးဆလောက်ပိုအစွမ်းထက်သည်။
အစားအစာအရင်းအမြစ်များတွင် ellagic acid ပါဝင်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ urolithin ပမာဏနှင့်မညီကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ URolithins ၏ bioavailability သည်လူတစ် ဦး စီ၏အူ microbiota အပေါ်အလွန်အမင်းမူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံမှအဘယ်ကြောင့် ၀ ယ်သင့်သနည်း။
Urolithin အမှုန့် A နှင့် Urolithin အမှုန့် B ကိုဤဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်မှု၊ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ရောင်းချမှုများပေါင်းစပ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင်အမြောက်အများရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာရန်အစွန်းရောက်တိကျမှုကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီသုတေသနပြုထားပြီးထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်အညီထုတ်လုပ်နေစဉ်နှင့်အပြီးသေချာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်ထုတ်ကုန်များသည် Urolithin အမှုန့်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး၊ အာနိသင်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့ကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးသည်။ ဖြန့်ဖြူးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်ထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးပြီးသင့်တော်သောစက်ရုံများ၊ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များသင့်ထံရောက်ရှိကြောင်းအာမခံရန်လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ Urolithin အမှုန့်များသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထုပ်ပိုးမှုသို့မဟုတ်သိုလှောင်စဉ်အတွင်းနေရောင်ခြည်နှင့်မထိတွေ့သောကြောင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံမှ Urolithin A အမှုန့်နှင့် Urolithin B အမှုန့်ကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အလွန်သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ကိုအာမခံသည်။
Urolithin A ဆိုတာဘာလဲ။
Urolithin A (UA) ကို punicalagin ကဲ့သို့သော ellagic acid (EA) နှင့် ellagitannins (ET) ပါဝင်သော အစားအသောက် ပိုလီဖီနိုလစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော လူ့အူဘက်တီးရီးယားမှ မျိုးပွားမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ ဤ polyphenolic ရှေ့ပြေးနိမိတ်များကို သစ်သီးများ (သလဲသီးနှင့် အချို့သော ဘယ်ရီသီးများ) နှင့် အခွံမာသီးများ ( walnuts နှင့် pecans ) တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Urolithin သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
Urolithin A (UA) သည် သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ရောဂါများအတွက် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် အူလမ်းကြောင်း မိုက်ခရိုဇီဝမှရရှိသော ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ အစားအသောက်ထုတ်ကုန်အများအပြားတွင် သဘာဝပိုလီဖီနော ellagitannins (ETs) နှင့် ellagic acid (EA) တို့ပါရှိသည်။ ... စုပ်ယူလိုက်သည်နှင့်၊ UA သည် အသက်အရွယ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ရောဂါများတွင် mitochondrial နှင့် cellular ကျန်းမာရေးကို အပြုသဘောသက်ရောက်သည်။
ဘယ်အသီးအနှံတွေမှာ Urolithin A ပါဝင်သလဲ
ellagitannins ၏ရင်းမြစ်များမှာသလဲသီး၊ အခွံမာသီး၊ သီးအချို့ (Raspberry, စတော်ဘယ်ရီ၊ BlackBerry, cloudberries)၊ လက်ဖက်၊ muscadine စပျစ်သီး၊ အပူပိုင်းသစ်သီးများနှင့်သပိတ်ပင်ရှိသောဝိုင်များ (အောက်ပါဇယား) ။
Urolithin ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အူ microbiota သည် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် urolithins A, B, C, နှင့် D. Urolithin A (UA) တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ellagic acid ကို metabolizes ပေးပါသည်။
Urolithin သည် ဘာအတွက်ကောင်းသနည်း။
Urolithin A သည် mitophagy ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး C. elegans ၏ သက်တမ်းကို ရှည်စေပြီး ကြွက်များတွင် ကြွက်သားလုပ်ဆောင်မှုကို တိုးစေသည်။
ဘယ်အစားအစာတွေမှာ Urolithin A ပါဝင်သလဲ။
urolithin A ၏ အာဟာရအရင်းအမြစ်များ
ယခုအချိန်အထိ သုတေသနပြုချက်များအရ သလဲသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလက်ဘယ်ရီသီး၊ camu-camu၊ သစ်ကြားသီး၊ သစ်အယ်သီး၊ pistachios၊ pecans၊ ချက်ထားသော လက်ဖက်ရည်၊ နှင့် oaken barrel-aged ဝိုင်နှင့် spirits များတွင် ellagic acid နှင့်/or ellagitannins များ ပါ၀င်သည် ။
Urolithin A ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
Urolithin A (UA) သည် သေးငယ်သော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး တိရစ္ဆာန်ဟောင်းများနှင့် အိုမင်းမှုဆိုင်ရာ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပုံစံများတွင် ကြွက်သားကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်မှရရှိသော ဇီဝရုပ်ကြွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများမှ Urolithin A ကိုမည်သို့ရနိုင်သနည်း။
Mitopure သည် Urolithin A ၏ မူပိုင်ခွင့်နှင့် အလွန်သန့်စင်သော ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အသက်အရွယ်အလိုက် ဆဲလ်လူလာကျဆင်းမှုကို တန်ပြန်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ mitochondria ဖြစ်သည်။ ... Urolithin A သည် ဆဲလ်များအတွက် စွမ်းအင်ပိုပေးကာ mitochondrial နှင့် ကြွက်သားများလုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
Mitopure သည် လူသားစားသုံးမှုအတွက် ဘေးကင်းပါသလား။
ထို့အပြင်၊ လူ့လက်တွေ့လေ့လာမှုများတွင် Mitopure သည် ဘေးကင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ (Singh et al၊ 2017)။ Mitopure သည် GRAS (ယေဘုယျအားဖြင့် လုံခြုံသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသော) စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပြီးနောက် US Food and Drug Administration (FDA) မှလည်း ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ထားပါသည်။
Mitopure ကို ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ရမလဲ။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန် တစ်နေ့လျှင် Mitopure softgel နှစ်ကြိမ်သောက်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Mitopure ကို နေ့စဥ်အချိန်မရွေး သောက်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ပရိုတိုကောဖြစ်သောကြောင့် နံနက်စာနှင့်အတူ သောက်သုံးရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Urolithin ဖြည့်စွက်စာဆိုတာ ဘာလဲ။
Urolithin A (UA) သည် သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ရောဂါများအတွက် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် အူလမ်းကြောင်း မိုက်ခရိုဇီဝမှရရှိသော ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ အစားအသောက်ထုတ်ကုန်အများအပြားတွင် သဘာဝပိုလီဖီနော ellagitannins (ETs) နှင့် ellagic acid (EA) တို့ပါရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုစားသုံးမိသောအခါ, ETs နှင့် EA ကိုအူမကြီးအတွင်းရှိ microflora အားဖြင့် UA ထဲသို့ဇီဝြဖစ်ကြသည်။
Urolithin A ဓာတ် အကျိုးကျေးဇူးများ
Urolithin A သည် ဆဲလ်များအတွက် စွမ်းအင်ပိုပေးကာ mitochondrial နှင့် ကြွက်သားများလုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည် ကြွက်သားကျန်းမာရေးကို တက်ကြွစွာ ထိန်းသိမ်းလိုသူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိစေသော သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Urolithin B ဆိုတာဘာလဲ။
Urolithin B သည် urolithin ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ellagitannins ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာစသည်တို့ဖြစ်သောစပျစ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ အနီရောင် Raspberry, walnuts (သို့မဟုတ်) သပိတ်ပင်ရှိသောအနီရောင်ဝိုင်ကဲ့သို့သောလူ့အူများတွင်ထုတ်လုပ်သော phenolic ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။ Urolithin B ကိုဆီး၌ urolithin B glucuronide ပုံစံဖြင့်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Urobolin သည် punica granatum (Pomegranate) မှရရှိသော ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ပြီး Urolithin B. Urobolin သည် ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ် ကြုံတွေ့ရသည့် ကြွက်သားများ ပျက်စီးမှုကို လျော့ပါးစေပြီး အဆီများသော အစားအစာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကြွက်သားများကို ဖိစီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Totiger TM, Srinivasan S, Jala VR, et al ။ Urolithin A သည်ပန်ကရိယကင်ဆာ၌ပစ်မှတ် PI3K/AKT/mTOR လမ်းကြောင်းသို့ဝတ္ထုရှည်သဘာဝဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Mol ကင်ဆာရောဂါ ၂၀၁၉; ၁၈ (၂): ၃၀၁-၃၁၁ ။ doi: 2019/18-2.MCT-301-311
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV Urolithin A သည်စမ်းသပ်ကြွက်ပုံစံတွင်ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းနှင့် Apoptosis ကိုတားဆီးခြင်းဖြင့် Cisplatin-Induced Nephrotoxicity ကိုလျော့ပါးစေသည်။ J Pharmacol Exp Ther 2017; 363 (1): 58-65 ။ doi: 10.1124/jpet.117.242420
Juan Carlos Espín, Mar Larrosa, María Teresa García-Conesa, Francisco Tomás-Barberán,“ Urolithins ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအရေးပါပုံ၊ Gut Microbial Ellagic Acid-Derived Metabolites: သက်သေအထောက်အထားများအဝေးကြီး”၊ ၂၀၁၃၊ ဆောင်းပါး ID ၂၇၀၄၁၈၊ စာမျက်နှာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ။ https://doi.org/2013/270418/15
Lee G, Park JS, Lee EJ, Ahn JH, Kim HS ။ activated microglia တွင် urolithin B ၏ anti-inflammatory နှင့် antioxidant ယန္တရားများ Phytomedicine ၂၀၁၉; ၅၅: ၅၀-၅၇ ။ doi: 2019/j.phymed.55
Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X. Urolithin A သည် microRNA-27 နှင့် ERK/PPAR-γလမ်းကြောင်းကို modulating လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ox-LDL-induced endothelial dysfunction ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျဆင်းစေသည်။ Mol Nutr အစားအစာ Res 2016; 60 (9): 1933-1943 ။ doi: 10.1002/mnfr.201500827